Mitarika Israel any New York: Dani Dayan, Consul General
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Mitarika Israel any New York: Dani Dayan, Consul General
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Desambra 28, 2019
Nanontany tena ve ianao hoe iza no misolo tena ny Fanjakan'ny Isiraely ao New York? Ny Kaonsily jeneraly ankehitriny dia ilay manan-kaja Dani Dayan. Nihazona io toerana io hatramin'ny volana Aogositra 2016 izy taorian'ny nanendrena azy ny praiminisitra Benjamin Netanyahu.
Làlana mahaliana mankany Manhattan
Teraka tao Buenos Aires, Arzantina (1955), nifindra tany Israel i Dayan tamin'ny 1971 ary nipetraka tao amin'ny faritr'i Tel Aviv any Yad Eliyahu. Dayan dia nahazo diplaoma tamin'ny Oniversite Bar Ilan niaraka tamin'ny BS amin'ny Toekarena sy ny siansa momba ny solosaina ary nahazo ny mari-pahaizana Master in Finance avy amin'ny Oniversite Tel Aviv. Nandany 7 taona mahery tao amin'ny Israel Defense Forces i Dayan, niasa tao amin'ny foibe fanodinana angon-drakitra MAMRAM, nahazo ny mari-pahaizana Major.
Na dia nanana asa malaza teo amin'ny governemanta aza i Dayan, dia nitondra traikefa lalina tamin'ny sehatra tsy miankina israeliana ho any New York. Tamin'ny 1982, tamin'ny faha-26 taonany, dia nanomboka orinasa mpampita haitao vaovao (Elad Systems) izay notantaniny hatramin'ny 2005. Nifantoka tamin'ny fampandrosoana, fampidirana ary fikojakojana ny rafitry ny fampahalalana be pitsiny, ny outsourcing ary ny fitantanana fotodrafitrasa amin'ireo mpanjifa eny imasom-bahoaka ny orinasa. sy sehatra tsy miankina. Mitohy ny fifandraisany amin'ny teknolojia rehefa manangona vola amin'ny orinasa teknolojia avo lenta sy lahateny ao amin'ny Oniversite Ariel izy.
Niditra tamin'ny politika i Dayan tamin'ny taona 1988 rehefa lasa Sekretera-Jeneralin'ny antoko politika Tehiya izy ary kandidà ho an'ny Knesset. Nanjary mpikambana tao amin'ny Komity Mpanatanteraky ny Filankevitra Yesha izay niasany nandritra ny 8 taona izy, talohan'ny fifidianana voafidy (2007). Amin'ny andraikiny amin'ny maha mpanatanteraka c-suite azy, nifantoka tamin'ny tombotsoan'ny mpiorina izy (2010) ary nanova ny filankevitra ho lobiana politika mahomby, tamin'ny fampiasana ny foto-kevitra momba ny lobiana amerikanina ho modely nomeny.
Tamin'ny 2013 dia nametra-pialana i Dayan hifantoka amin'ny iraka nampanaovina azy - nihazona ny West West, nahita ity fandaminana ity ho tombontsoan'ny Israel. I Dayan dia raisina ho toy ny, "endrika fihetsika israeliana hipetraka ho an'ny sehatra iraisam-pirenena." Nanohitra ny fananganana fanjakana Palestiniana i Dayan ary nitazona ny finoana fa ny filazan'i Israel ny Banky Andrefana dia mifototra amin'ny angona tantara.
Ny fihaonako tamin'i Dayan dia tsy natao hifanakalo hevitra momba ny politika fa ny hijerena ny fitomboan'ny fizahantany any Israel ankehitriny. Tamin'ny taona 2018, mpizahatany efa ho 4 tapitrisa no nitsidika an'i Israel, firaketana an-tsoratra nandritra ny fotoana rehetra, ary mba hahatonga ny sary ho rosier aza, nihoatra ny 6.3 miliara dolara amerikana ny tapakila fizahantany. Ny fiakarana dia azo ampifandraisina amin'ny fampielezana marketing 93 tapitrisa dolara amerikana izay nahatratra ny tsena tany Etazonia, Alemana, Rosia, Italia, Angletera, Sina, Okraina, Brezila ary Filipina.
Ny sehatry ny fizahan-tany dia namporisika ny fandraharahana, mitentina 38.5 tapitrisa dolara amerikana hanentanana ny fananganana trano fonenana vaovao manerana ny firenena, ka nahatonga efitrano vaovao 4000 eo ho eo. Mba hihazonana ny firoboroboan'ny fitomboana, manokatra làlana vaovao i Israel ary miara-miasa amin'ny fikambanana fizahan-tany vaovao, ao anatin'izany ireo firenena izay manana sisintany miaraka amin'i Israel.
Ny Consul General dia nanasongadina ny zava-misy fa tato anatin'ny taona vitsivitsy dia nanisy zotram-piaramanidina vaovao mankany / avy amin'ny tanàna iraisampirenena, nampiditra tetika marketing izay misy fitsidihana fialam-boly sy mandavantaona, fiaraha-miasa amin'ireo masoivohon'ny fizahan-tany an-tserasera ary fandrindrana ireo hetsika manerantany (izany hoe ny bisikileta iraisam-pirenena fifaninanana sy fifaninanana hira).
Raha maherin'ny 40 isan-jaton'ny mpizahatany mankany Israel no avy mpitsidika miverina, ny sasany amin'ireo olana momba ny fizahan-tany dia:
Ny mpitsidika dia afaka manantena fa ny fandaniana dia mitovy amin'ny London sy New York. Na izany aza, raha afaka mijery mihoatra ny hotely lafo vidy ny mpandeha dia manolotra trano fandraisam-bahiny sy trano mora vidy amin'ny alàlan'ny Airbnb i Israel. Na dia betsaka aza ny trano fisakafoanana amin'ny teboka marobe, ny sakafo an-dalambe any Israel dia heverina ho tena tsara sy sarany.
Hatramin'ny faran'ny herinandro teo dia tsy nisy ny fitateram-bahoaka; na izany aza tsy olana intsony izany satria ny fitateram-bahoaka fitateram-bahoaka maimaim-poana dia manomboka amin'ny zoma hariva ka hatramin'ny asabotsy hariva.
Vaovao tsara ho an'ny mpitsidika
Tel Aviv dia ivon-toerana iraisam-pirenena ho an'ireo mpizahatany LGBTQ. Ny fankalazana ny reharehan'ny pelaka isan-taona dia nahasarika israeliana sy mpizahatany an'arivony maro tamin'ny diabe nahasarika olona maherin'ny 150,000.
Israel dia manana vegan isan-kapita mihoatra ny firenena hafa. Ny fanadihadiana natao tamin'ny 2014 dia mamaritra fa ny 8 isan-jaton'ny israelianina dia mpihinana zavamaniry ary efa ho 5 isan-jato no vegan (0.5 isan-jaton'ny mponina eran-tany ihany no vegan).
Israel dia samy manana ny toerana ambany indrindra eto an-tany, ny Ranomasina Maty, ary ny farihy farihy ambany indrindra amin'ny ranomasin'i Galilia.
Taorian'ny Kanada, Israel no 2 manerantanynd firenena nahita fianarana tsara indrindra (2012 OECD).
Ny fikambanana Yad Sarah dia manana fitaovana hanampiana ireo mpitsidika an'i Israel (izany hoe seza misy kodiarana, tehina). Amin'ny alalan'ny [email voaaro] ary ny ankamaroan'ny tranombakoka lehibe dia nanjary azon'ny rehetra jerena.
Ireo mpanao dia lavitra dia hahita trano honenana ao amin'ny trano fandraisam-bahiny izay hita manerana ny firenena.
Raha te hijanona ho mifandray dia afaka manofa karatra SIM na telefaona israeliana.
Tsy ilaina ny fanaovana vaksiny raha handeha ho any Isiraely. Misy ny dokotera sy ny hopitaly. Ny loza mety hitranga amin'ny fahasalamana lehibe indrindra dia ny toetrandro mafana be ary mijanona hydrate hanoro hevitra azy mafy.
Ny sainan'i Isiraely
Nandritra ny fitsidihako vetivety tamin'ny Consul General dia nanintona ny saiko ho amin'ny sainam-pirenena israeliana teo amin'ny rindrin'ny biraony izy. Ity sainam-pirenena ity dia naverina tamin'ny World Trade Center taorian'ny 9/11 ary natolotry ny ben'ny tanàna lefitra Israeliana Shimon Peres avy amin'ny ben'ny tanànan'ny tanànan'i New York Michael Bloomberg tamin'ny 2006. Midika izany fa mahazaka, manohitra ny fampihorohoroana, ary ny fifamatorana eo amin'i Etazonia sy Israel. Napetrak'i Perez tao amin'ny biraon'ny Consulat Israeli New York.